Inta badan oo naga mid ah, noo soo xiriiro liiska qaar ka mid ah qaybta ugu muhiimsan ka mid ah iPhone iyo daryeel aan ugu iyaga taageero sidii ay naga xasuusin ah noo kuwa jecel yahay, oo saaxiibadiis iyo kuwa fog laga reebo. Sababtan awgeed, mobiilka iPhone ama si fiican u yaqaan nidaamka maamulka xiriir ay sida Lugood dib xiriirada by default. Muddo, buug cinwaanka uu qaabkii la xiriiro mar dambe ma aad u baahan tahay si heer ay ku iPhone u ma qaban karto wax ka badan, taas oo keenta in loo baahan yahay in ay tirtirto qaar ka mid ah xiriirada kuwan. Takhalusid qaar ka mid ah xiriirada, kuwaas oo ay u fududaato in la helo xidhiidh aad rabto. Maqaalkani wuxuu sharxayaa qaar ka mid ah hababka ugu caamsan ee la tirtiro xiriirada iPhone.
Weligaa mala yaabtay sida aad nadiifin kartaa ilaa aad iPhone oo la tirtiro xiriirada aan loo baahnayn? Halkan waxa ku jira laba siyaabood oo lacag la'aan ah in aad si fudud u isticmaali kartaa si aad u nadiifiso ilaa aad xiriirka la leedahay.
Habka hal - isticmaalaya codsiga xiriirkaaga
Tani waa sida ugu horeysay oo fudud in ay tirtirto mid xiriir ah oo ay ka mid. Si fudud u raac talaabooyinka soo socda:
Fur codsiga Contact ku saabsan gurigaaga screen iPhone.
Hel xiriir aad rabto inaad tirtirto. si fudud aad ku qor kartaa magaca sare ee shaashadda u baadhi hore.
Tubada xiriir ah in la furo faahfaahinta.
Tubada edit ee geeska kore ee midigta ee faahfaahinta xiriirka ka.
Hoos hoose ee si faahfaahsan xiriir ah oo ka jaftaa on xiriir delete si loo xaqiijiyo.
Habka laba - adiga oo isticmaaleya buug cinwaanka iyo Lugood
Haddii kale, waxaad dooran kartaa in ay tirtirto xiriirada isticmaalka buugga cinwaanka. Talaabooyinka soo socda waa in la raacaa:
Fur buugga cinwaanka. Haddii aad syncing xiriirada ku saabsan PC ama Mac, waxaad iyaga ka heli kartaa buugga cinwaanka kombiyuutarka ah.
Dooro xiriirrada aad rabto in aad tirtirto.
Haddii aad isticmaalayso Mac, ee buugga cinwaanka guji "Edit" menu ka dibna ku dhuftay "Delete card" on click PC ah "Action" in liiska xiriir ah, ka dibna "Menu" iyo ka dibna "Delete Contact" sida hoos ku qoran.
Connect aad iPhone si aad u computer, u furan Lugood dooro qalab aad ugu xaq u sareeya ee suuqa kala Lugood ah.
Riix badhanka info sare ee suuqa kala Lugood ah, awood "contacts u hagaagsan" iyo "Dhammaan xiriirada" meesha ugu hooseysa ka jaftaa. Guji "codso" si hagaagsan aad iPhone la Lugood iyo saaro xiriirada aad la tirtiro buugga cinwaanka.
Si joogto ah u tirtirto xiriir la Wondershare SafeEraser.
Mararka xiriir la tirtiri karaa, laakiin weli u muuqan in aad xiriir menu sida aad ka raadin iyada oo filter raadinta. Tani waxay ka mid noqon kara macluumaadka xasaasiga ah in aad doonayay in lagu tirtiro muddo dheer ka hor. Si la dhibaatooyinka sida isticmaalka Wandershare SafeEraser waxaa lagu dhiirigelinayaa qaban.
Wondershare SafeEraser ka saaraysaa oo dhan fariimaha tirtiray, aad khasnado, taariikhda dhirta, codsiyada junk iyo files. Si aad u tirtirto xiriir joogto ah iyada oo la isticmaalayo ee Wondershare SafeEraser, habka soo socda waxaa la socda:
Orod SafeEraser ku on your computer dib markii la rakibey guul.
Connect qalab macruufka in kombiyuutarka via cable USB ah.
Sug suuqa kala pop up muujinaya qalab conntected si guul ah.
Habka 1: Data Nadiifi
Riix "1-Guji nadiifi 'on furmo suuqa hoose. Barnaamijka waxaa si toos ah u bilaabi doonaa baar qalab aad.
Marka habka iskaanka waa dhameystiran, barnaamijka wuxuu muujin doonaa wadarta guud ee files junk. Guji "nadiifi" oo bilaash ah meesha bannaan ee.
Si loo hubiyo in dhammaan faylasha junk si buuxda nadiifiyo, qalabka waa in weli xiran inta hawlgalka oo dhan.
Marka nadiifinta dhamaato, barnaamijka wuxuu muujin doonaa macluumaad meel bannaan oo aad shaashadda sida soo socota.
Hadda waxaad riixi kartaa guriga dib ugu soo laabtaan suuqa kala weyn ama guji "Rescan" ay ku soo celiyaan nidaamka.
Habka 2: tirtiro tirtiray Files
Tani waxay si joogto ah waxay tirtirtaa files dibabaxayaal.
In uu furmo suuqa hoose, guji "masixi tirtiray Files" iyo habka iskaanka waxaa bilaaban doona. Barnaamijku waxa uu sidoo kale muujin doontaa horumarka diiwaanka la ogaado.
Masixi files ee la doortay adigoo gujinaya "masixi Hadda" Waxa kale oo aad dooran kartaa faylasha aad rabto tirtirayaa adigoo sanduuqa ku yaala xagga hore waxaa ka mid ah.
Barnaamijku wuxuu ka dibna aad keeneysaa in si ku qor erayga 'tirtirto' si loo xaqiijiyo tirtirka joogto ah.
Marka tirtirka dhamaato, barnaamijka wuxuu muujin doonaa "si guul tirtirayaa".
Wondershare SafeEraser waa mid ka mid ah qalab lagu nadiifiyo ugu kalsoon tahay. Waxa aanu taageertaa oo keliya ma aha sawiro iyo videos laakiin sidoo kale tirtiro Guda wac, emails, khasnado, mail cod, id tufaaxa, jadwalka iyo xiriirada. Download ku version maxkamad xor ah waa in hadda loo qiimeeyo.
Masixi tirtiray iPhone Xiriirada Video Tutorial
> Resource > masixi > 3 Siyaabaha Delete aad iPhone Xiriir